Gudoomiyaha Maxkamadda Sare oo Ka Hadlay Isbadalo Lagu Sameeyey Garsoorka Dalka iyo Sababta Iscasilaada Garsoorayaasha Awdal – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee Somaliland Garyaqaan Aadan Xaaji Cali ayaa Sabtidan maanta ka hadlay isbadalo mudooyinkan dambe lagu hayey garsoorka dalka, iyo sababta Iscasilaadda garsoorayaasha gobolka Awdal.
Gudooomiye Aadan Xaaji Cali ayaa sheegay in Guddida Cadaaladda dalka ay mudooyinkii dambe ay goboladda dalka ka wadeen qiimayn iyo kormeer ay ku sameeyeen goboladda dalka iyo degmooyinka.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in sanadkan inta ka hadhay ay maxkamadda wareegtaa ay tagi doonto goboladda iyo degmooyinka dalka si halkaasi ay ugu qaadaan kiisaska yaala.
Sidoo kale Guddida Cadaaladda ee dalku waxay tababaro siin doonaa bahda cadaaladda dalka.
Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ayaa sheegay in isbadal wayn lagu sameeyey garsoorka dalka oo wax laga qabtay mushaharadooda iyo gudooyinkooda.
Halkan ka daawo shirka jaraa’id ee gudoomiyaha: